63 Ndiani uyu ari kubva kuEdhomu,+ iye anobva kuBhozra+ ane nguo dzine mavara anopenya, iyeyu anokudzwa akapfeka zvipfeko zvake, ari kufamba musimba rake guru? “Ndini Iye ari kutaura nokururama,+ Iye ane simba rakawanda rokuponesa.”+ 2 Nei zvipfeko zvako zvakatsvuka, uye nguo dzako dzakaita sedziya dzomunhu ari kutsika-tsika chisviniro chewaini?+ 3 “Ndakatsika-tsika chisviniro chewaini ndiri ndoga,+ pandakanga ndisina munhu wokune mamwe marudzi. Ndakaramba ndichivatsika-tsika ndakatsamwa,+ uye ndakaramba ndichivatsika-tsika ndakashatirwa.+ Ropa ravo raitsatika rakaramba richitsatikira panguo dzangu,+ uye ndakasvibisa zvipfeko zvangu zvose. 4 Nokuti zuva rokutsiva riri mumwoyo mangu,+ uye gore revakadzikinurwa vangu rasvika. 5 Ndakaramba ndakatarira, asi kwakanga kusina mubatsiri; uye ndakakatyamadzwa, asi kwakanga kusina aitsigira.+ Naizvozvo ruoko rwangu rwakandiponesa,+ uye hasha+ dzangu ndidzo dzakanditsigira. 6 Ndakaramba ndichitsika-tsika marudzi ndakatsamwa, ndikaadhakisa nehasha+ dzangu uye ndikadururira pasi ropa rawo raitsatika.”+ 7 Ndichataura nezvomutsa worudo waJehovha,+ kurumbidzwa kwaJehovha, maererano nezvose zvatakaitirwa naJehovha,+ kunyange zvakanaka zvakawanda zvaakaitira imba yaIsraeri+ zvaakavaitira maererano nengoni+ dzake uye maererano noukuru hwomutsa wake worudo. 8 Iye akati: “Chokwadi ivo vanhu vangu,+ vanakomana vasingazonyengeri.”+ Naizvozvo akava Muponesi wavo.+ 9 Pakutambudzika kwavo kwose naiyewo akanga achitambudzika.+ Nhume yake yakavaponesa.+ Akavadzikinura norudo rwake netsitsi dzake,+ akavasimudza, akavatakura mazuva ose ekare kare.+ 10 Asi ivo vakapanduka,+ vakarwadzisa mudzimu wake mutsvene.+ Zvino akachinja akava muvengi+ wavo; iye akavarwisa.+ 11 Uye mumwe akatanga kuyeuka mazuva ekare kare, Mosesi mushumiri wake, achiti: “Ari kupi Iye akavabudisa mugungwa+ nevafudzi vemakwai+ ake? Ari kupi Iye akaisa mudzimu Wake mutsvene maari?+ 12 Iye akaita kuti ruoko Rwake rwakanaka+ ruende kuruoko rworudyi rwaMosesi; Iye aikamura mvura pamberi pavo+ kuti azviitire zita rinogara nokusingagumi;+ 13 Iye aivafambisa nomumvura yaiva nemafungu zvokuti, sebhiza riri murenje, havana kugumburwa?+ 14 Mudzimu waJehovha wakavazorodza,+ sezvinoitika kana mhuka ikaenda mubani.” Nokudaro makatungamirira vanhu venyu kuti muzviitire zita rakanaka.+ 15 Tarirai muri kudenga,+ muone muri panzvimbo yenyu yokugara yakakwirira youtsvene norunako.+ Kushingaira kwenyu+ nesimba renyu rizere, kunetseka kwomwoyo wenyu,+ nengoni+ dzenyu zviripi? Zvarega kuuya kwandiri.+ 16 Nokuti ndimi Baba vedu;+ kunyange Abrahamu angave asina kutiziva uye Israeri angasatiziva, imi, haiwa Jehovha, ndimi Baba vedu. Mudzikinuri wedu wekare kare ndiro zita renyu.+ 17 Haiwa Jehovha, munorambirei muchititsausa panzira dzenyu? Munoomeserei mwoyo yedu kuti tirege kukutyai?+ Dzokai nokuda kwevashumiri venyu, madzinza enhaka yenyu.+ 18 Vanhu venyu vatsvene+ vaiva nayo kwenguva duku. Mhandu dzedu dzatsika-tsika nzvimbo yenyu tsvene.+ 19 Kwenguva refu takava sevaya vamusina kumbotonga, sevaya vasina kumboshevedzwa nezita renyu.+